မအလ မှ အရေးပေါ်ကြေညာ
မအလ မှ အရေးပေါ်ကြေညာ မအလမှ လျို့ဝှက်ချက်ကြီးတစ်ခုကို ဖွင့်ထုတ်လိုက်တဲ့ ရုပ်သံ အောက်တွင် ရုပ်သံဖိုင်အား ဖော်ပြထားသည်။ ခရက်ဒစ်ဗွီဒီယို မအလ မှ အရေးပေါ်ကြေညာ မအလမှ လျို့ဝှက်ချက်ကြီးတစ်ခုကို ဖွင့်ထုတ်လိုက်တဲ့ ရုပ်သံ အောက်တွင် ရုပ်သံဖိုင်အား ဖော်ပြထားသည်။ ခရက်ဒစ်ဗွီဒီယို မအလ မှ အရေးပေါ်ကြေညာ […]
အမေစုပြန်လာတော့မည်…. ပရိသတ်ကြီးအတွက် ဒီကနေ့တင်ဆက်ပေးသွားမယ့်သတင်းအကြောင်းအရာတွေကတော့ တိုင်းပြည်ကိုဆက်လက်အုပ်ချုပ်သွားဖို့အရေးမှာ စိတ်ကူးယဉ်အဆင့်ထက်ပိုလာနိုင်ဖွယ်မရှိသည့် အာဏာရှုးစစ်ကောင်စီဆိုတဲ့ ဆောင်းပါးအကြောင်းအရာ… အခင်အမင်မပျက်သေးသည့် တရုတ်နှင့်NLD တို့ရဲ့ဆက်ဆံရေး ဆာင်းပါးအကြောင်းအရာတို့ကို ပရိသတ်ကြီးအတွက် တင်ဆက်ပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်။… အပြည့်အစုံကို အောက်ကရုပ်သံဖိုင်တွင် ဆက်လက်ကြည့်ရှုနိုင်ပါတယ်။ ခရက်ဒစ်ဗွီဒီယို… အမေစုပြန်လာပြီ…. ပရိသတ်ကြီးအတွက် ဒီကနေ့တင်ဆက်ပေးသွားမယ့်သတင်းအကြောင်းအရာတွေကတော့ တိုင်းပြည်ကိုဆက်လက်အုပ်ချုပ်သွားဖို့အရေးမှာ စိတ်ကူးယဉ်အဆင့်ထက်ပိုလာနိုင်ဖွယ်မရှိသည့် အာဏာရှုးစစ်ကောင်စီဆိုတဲ့ ဆောင်းပါးအကြောင်းအရာ…. အခင်အမင်မပျက်သေးသည့် […]
မနက်ဖြန် သရုပ်ဆောင် မင်းသားချော ရဲတိုက်ရဲ့ အမှုကို အထူးတရားရုံးမှာ ရုံးထုတ် စစ်ဆေးမည် သရုပ် ဆောင် ရဲတိုက်ကို ပုဒ်မ (၅၀၅-က)ဖြင့် ဧပရယ် လ အတွင်းက ဖမ်းဆီး ထားခဲ့ပြီး ထိုသို ဖမ်းဆီးချိန်တွင် စိတ်ကြွ ဆေးပြား တွေ့ရှိသည်ဟု ဆိုကာ မူးယစ်ပုဒ်မ […]
အီးပေါက်ရင် ခြင်တွေအများကြီး သေနိုင်တဲ့ အစွမ်းကြောင့် ဒေါ်လာသန်းချီရနေတဲ့ အမျိုးသား..1
အီးပေါက်ရင် ခြင်တွေအများကြီး သေနိုင်တဲ့ အစွမ်းကြောင့် ဒေါ်လာသန်းချီရနေတဲ့ အမျိုးသား..1 ပရိတ်သတ်ကြီးရေ အခုတစ်ခါမှာဆိုရင်တော့ လူတွေကို ဒုက္ခပေးတဲ့ ခြင်တွေကို အီးပေါက်လိုက်ရုံနဲ့ သေစေနိုင်တဲ့ အစွမ်းပိုင်ရှင် အမျိုးသားတစ်ယောက်အကြောင်းကို ပြောပြပေးသွားမှာပဲဖြစ်ပါတယ်။ သိတဲ့အတိုင်းပါပဲ ခြင်တွေက သွေးစုပ်ခါနီးဆိုရင် လူတွေနား တဝီဝီနဲ့ နားညီးလှစေတာကြောင့် အနှောင့်အယှက်ဖြစ်တာအမှန်ပါပဲနော်။ ခြင်ဆိုတာဟာ လူတွေကို […]
အီးပေါက်ရင် ခြင်တွေအများကြီး သေနိုင်တဲ့ အစွမ်းကြောင့် ဒေါ်လာသန်းချီရနေတဲ့ အမျိုးသား..
အီးပေါက်ရင် ခြင်တွေအများကြီး သေနိုင်တဲ့ အစွမ်းကြောင့် ဒေါ်လာသန်းချီရနေတဲ့ အမျိုးသား.. ပရိတ်သတ်ကြီးရေ အခုတစ်ခါမှာဆိုရင်တော့ လူတွေကို ဒုက္ခပေးတဲ့ ခြင်တွေကို အီးပေါက်လိုက်ရုံနဲ့ သေစေနိုင်တဲ့ အစွမ်းပိုင်ရှင် အမျိုးသားတစ်ယောက်အကြောင်းကို ပြောပြပေးသွားမှာပဲဖြစ်ပါတယ်။ သိတဲ့အတိုင်းပါပဲ ခြင်တွေက သွေးစုပ်ခါနီးဆိုရင် လူတွေနား တဝီဝီနဲ့ နားညီးလှစေတာကြောင့် အနှောင့်အယှက်ဖြစ်တာအမှန်ပါပဲနော်။ ခြင်ဆိုတာဟာ လူတွေကို […]
ာကေတ KBZ Bank ဗုံးကြဲခံရ…
သာကေတ KBZ Bank ဗုံးကြဲခံရ… အောက်တွင် ဗီဒီယိုဖော်ပြထားပါတယ်… ခရက်ဒစ်ရ် ဗီဒီယို သာကတေ KBZ Bank ဗုံးကွဲခံရ… အောက်တွင် ဗီဒီယိုဖော်ပြထားပါတယ်… ခရက်ဒစ်ရ် ဗီဒီယို သာကတေ KBZ Bank ဗုံးကွဲခံရ… အောကျတှငျ ဗီဒီယိုဖျောပွထားပါတယျ… ခရကျဒဈရျ ဗီဒီယို သာကတေ […]
အီးပေါက်ရင် ခြင်တွေအများကြီး သေနိုင်တဲ့ အစွမ်းကြောင့် ဒေါ်လာသန်းချီရနေတဲ့ အမျိုးသား
အီးပေါက်ရင် ခြင်တွေအများကြီး သေနိုင်တဲ့ အစွမ်းကြောင့် ဒေါ်လာသန်းချီရနေတဲ့ အမျိုးသား ပရိတ်သတ်ကြီးရေ အခုတစ်ခါမှာဆိုရင်တော့ လူတွေကို ဒုက္ခပေးတဲ့ ခြင်တွေကို အီးပေါက်လိုက်ရုံနဲ့ သေစေနိုင်တဲ့ အစွမ်းပိုင်ရှင် အမျိုးသားတစ်ယောက်အကြောင်းကို ပြောပြပေးသွားမှာပဲဖြစ်ပါတယ်။ သိတဲ့အတိုင်းပါပဲ ခြင်တွေက သွေးစုပ်ခါနီးဆိုရင် လူတွေနား တဝီဝီနဲ့ နားညီးလှစေတာကြောင့် အနှောင့်အယှက်ဖြစ်တာအမှန်ပါပဲနော်။ ခြင်ဆိုတာဟာ လူတွေကို […]
ကုမ္ပဏီတွေမှာ ဝင်ငွေများစွာရနိုင်တဲ့အလုပ်ကိုလုပ်ကိုင်နိုင်ပေမဲ့ သင်ကြားရေးကိုသာနှစ်သက်တဲ့ ခန့်ချောလွန်းတဲ့ ကျောင်းဆရာ ဆရာများ (သို့) ဆရာမများအကြောင်းကို ပြောတဲ့အခါ ငါတို့က အရမ်းဆိုးတဲ့ဆရာများကိုဘဲ စဉ်းစားတတ်ကြပါတယ် ။ ဒါပေမယ့် အခုဖော်ပြမယ်ဆရာက ကျောင်းသားတွေကို သင်ယူမှုပိုပြီးအာရုံစိုက်စေမှာ သေချာတယ်လို့ ပြောနိုင်ပါတယ် ။ Jiang Boyang အမည်ရှိ အမျိုးသားဟာ တရုတ်အထက်တန်းကျောင်းမှ […]
ကားပါကင်မှာ ပန်းကုံးလေးတွေ လက်ကကိုင်ထားရင်း ငုတ်တုတ်လေး အိပ်မောကျနေရှာသော သနားစရာ ကောင်လေး
ကားပါကင်မှာ ပန်းကုံးလေးတွေ လက်ကကိုင်ထားရင်း ငုတ်တုတ်လေး အိပ်မောကျနေရှာသော သနားစရာ ကောင်လေး ထိုင်းနိုင်ငံမှ အသက် ၆နှစ်အရွယ် ကောင်လေးတစ်ဦးသည် မိဘနှစ်ပါးလုံးရှိပါလျက်နှင့် စားဝတ်နေရေးအတွက် လမ်းမပေါ်ထွက်ပြီး ပန်းကုံးလေးများကို လိုက်လံရောင်းချခြင်းဖြင့် ဝင်ငွေရှာနေရဆဲဖြစ်သည်။ ကောင်လေးသည် ညဖက်တွေထိ ပန်းကုံးလေးတွေကို မကုန်မချင်း ရောင်းချရခြင်းဖြင့် ပင်ပန်းနွမ်းနှယ်လာကာ ကားပါကင်တစ်ခုရဲ့ ထောင့်လေးတစ်နေရာတွင် […]
နွားမွေးပြီးကျောင်းထားပေးခဲ့သော အဖိုးဖြစ်သူကို ကျေးဇူးတင်လွန်း၍ ဘွဲ့ရချိန်တွင် လူအများကြား ထိုင်ကန်တော့ခဲ့သည့် မိန်းကလေး
နွားမွေးပြီးကျောင်းထားပေးခဲ့သော အဖိုးဖြစ်သူကို ကျေးဇူးတင်လွန်း၍ ဘွဲ့ရချိန်တွင် လူအများကြား ထိုင်ကန်တော့ခဲ့သည့် မိန်းကလေး ထိုင်းနိုင်ငံမှ အသက် ၂၃နှစ်အရွယ် မိန်းကလေးသည် ကံဆိုးစွာဖြင့် မိဘနှစ်ပါးလုံးမှာ ဆုံးပါးသွားသည့်အတွက် အဖိုးဖြစ်သူလက်ထဲတွင် ကြီးပြင်းလာခဲ့ရသည်။ အဖိုးဖြစ်သူသည် မြေးမလေးအား မိဘ မေတ္တာဓာတ်အပြည့်အဝပေးကာ ဂရုတစိုက်နှင့် ကျွေးမွေးပြုစုခဲ့ပြီး ပညာတတ်ကြီးဖြစ်သည်ထိကို ကျောင်းထားပေးခဲ့သည်။ ထို့ကြောင့် […]